Wacaal daray ah: Daacish oo sheegatay Itoobiyaankii lagu dilay xalay magaalada Bosaaso – Radio Daljir
Oktoobar 2, 2018 11:04 b 0
Kooxda Daacish ee ku dhumaalaysanaya Buuralayda Golis ee gobolka Bari ,ayaa sheegatay mas,uuliyada dilkii loo gaystay xalay Afartan qof oo Itoobiyaanka ah.
War qoraal ah oo ay ku baahiyeen kooxda Daacish bartooda internertka ee Amaq News, ayay ku sheegeen in xubno ka tirsan kooxdooda oo Baastoolado ku hubaysan ay dileen 4 nin oo Itoobiyaan ah, halka markii hore la sheegay in dadka ladilay ay ahaayeen Oromo .
Ciidamada amniga ee gobolka bari ayaa ku daba jooga kooxdii dilka gaystay , waxaana maanta ilaa xalay howlgalkii socday lagu soo qab qabtay dad looga shakisan yahay in ay ahaayeen ragii weerarka soo qaaday.
Amniga magaalada Bosaaso ayaa maalmihii udambeeyay waxa uu ahaa mid sii xumaanayaya , waxaana dhowr jeer oo hore lagu dilay magaalada dad isgu jira Askar , Ganacsato, iyo Dhalinyaro ka qalin jabisay jaamacadaha ku yalaa magaalada Bosaaso.
Maamulka gobolka ayaa sheegay in dilalkaasi dhacay loo soo qabtay qaar kamid ah dadkii dilkaasi fuliyay kuwaas oo dhawaan Maxkamada la soo taagi doono , halka kuwo kalena lagu daba joog.
Diiwaanka warkan radio Daljir.com